Safiirka Shiinaha oo mar kale ka hadlay Xidhiidhka Cusub ee Taiwan iyo Somaliland - Somaliland Post
Home News Safiirka Shiinaha oo mar kale ka hadlay Xidhiidhka Cusub ee Taiwan iyo...
Hargeysa (SLpost)- Dawladda Shiinaha ayaa weli sii wadda dagaalka ka dhanka ah xidhiidha iskaashi ee dhex maray Dawladaha Somaliland iyo Taiwan.
Safiirka Jamhuuriyadda Dadka ee Shiinaha u fadhiya Magaalada Muqdisho ee Dalka Soomaaliya Amb. Qin Jian oo dhawaan booqasho ku yimid Somaliland, ayaa qoraal ku qoran luqad adag ku baahiyey Barta uu ku leeyahay Twitter-ka, kaasi oo ah farriin ku socota Dawladaha Somaliland iyo Taiwan.
Ambassador Qin Jian waxa kale oo uu sheegay in Taiwan ahayd dhul uu Shiinuhu aasaasay 71 sanadood ka hor, sidaasi darteed aanay xilligan ka tanaasuli Karin.
Safiirku waxa kale oo uu sheegay, “Taiwan waxay ka tirsanayd China illaa wakhtiyadii hore. 71 sannadood ka hor China wuxuu geeyay 35 Milyan oo ruux, waxaana laga aasaasay Shiinaha cusub,” ayuu yidhi.